Reggae sii! Amaanka Dalxiiska Jamaica inkasta oo ay jiraan xeerar Bandow ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Reggae sii! Amaanka Dalxiiska Jamaica inkasta oo ay jiraan xeerar Bandow ah
Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dowladda • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Iyada oo ay jiraan qaar ka mid ah kuwa ugu ammaansan dhammaan meelaha loo dalxiis tago ee adduunka sida kooxda Sandals and Beach, dalxiiska Jamaica ayaa la filayaa inuu sii kobco inkastoo xeerka bandowga cusub uu maanta ku dhawaaqay RW Jamaica Michael Holness.
Marka la barbardhigo Mareykanka faafitaanka COVID-19, tirada dhimashada, Jamaica si fiican ayey u shaqeyneysaa. Waxaa la xisaabiyaa hal milyan oo qof oo Jamaica ah waxay ku jirtaa booska 123 ee adduunka, marka la barbardhigo US postion 14.
Jamaica ayaa maamulaysay ugu yaraan 369,960 qiyaasta tallaallada COVID illaa hadda. Isagoo u malaynaya in qof kastaa u baahan yahay 2 qiyaasood, waa ku filan tahay in la tallaalo 6.3% ee dadka dalka. Kani waa lambar hoose marka la barbar dhigo qiyaas ka badan 50% USA.
Intii lagu gudajiray usbuucii la soo dhaafay, Jamaica celcelis ahaan qiyaastii 4,933 qiyaasood ayaa la maamulay maalin walba. Heerkaas, waxay qaadan doontaa mid dheeri ah 120 maalmood si loo siiyo qiyaaso ku filan 10% kale oo dadweynaha ah.
In kasta oo xudduuddu weli furan yihiin, dalxiiskuna uu ku soo noqonayo waddankan Jasiiradda Caribbean -ka ah, bandow cusub ayaa la saaray laga bilaabo Ogosto 11 illaa Ogosto 31.
In kasta oo laga naxo sida ay u dhawaaqdo, tani si fiican uma noqon karto farqiga weyn ee soo-booqdayaasha ku raaxaysanaya fasaxa Jamaica ee meelaha badan ee loo dhan yahay sida kabahaaga, laakiin waa digniin cad Raiisul Wasaaraha Jamaica Michael Holness, in halista COVID-19 ay tahay mid dhab ah oo wax laga qabanayo.
Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku boorrinaysa dadka Mareykanka ah ee ku sugan Jamaica in si buuxda loo tallaalo ka hor inta aysan safrin.
Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Maraykanka (CDC) ayaa soo saaray Caafimaadka Socdaalka Heerka 3aad Ogaysiiska Jamaica sababtuna tahay COVID-19, taasoo muujineysa heerka sare ee COVID-19 ee dalka. Waxay leedahay: “Khatartaada inaad ku dhacdo COVID-19 iyo inaad yeelato astaamo daran ayaa laga yaabaa inay yaraato haddii si buuxda loogu tallaalo Tallaalka la oggolaaday ee FDA. “
Maanta Raiisel wasaaraha Jamaica Andrew Holness ayaa ku dhawaaqay dib-u-eegis lagu sameeyay borotokoolka Covid-19 ee hoos imaanaya Xeerka Maareynta Khatarta Musiibada.
Isagoo ka hadlaya shir jaraa'id oo dijitaal ah maanta, Holness wuxuu sheegay in tallaabooyinka cusubi ay khuseeyaan muddada saddexda toddobaad ah laga bilaabo Arbacada, Ogosto 11 illaa Ogosto 31.
Wuxuu ku dhawaaqay in laga bilaabo 11 -ka Ogosto, saacadaha bandowga habeenkii ay socon doonaan laga bilaabo 7 -da fiidnimo ilaa 5 -ta aroornimo Isniinta ilaa Jimcaha.
#Aroosyada - In ka badan 50 qof looma oggolaan doono inay jir ahaan ka qaybgalaan aroos.
Kulamada Guud ee Hay'adaha Sannadlaha ah & kuwa aan caadiga ahayn, tirada ugu badan ee dadka loo oggol yahay inay ka qaybgalaan jidh ahaan waa 50. pic.twitter.com/So7oDMOCUe
Sabtida, bandowgu wuxuu socon doonaa 6 -da fiidnimo ilaa 5 -ta aroornimo maalinta xigta, halka Axadda bandowgu uu socon doono 2 -da fiidnimo ilaa 5 -ta aroornimo maalinta xigta.
Meheradaha waxaa laga rabaa inay xidhaan hal saac ka hor wakhtiga bandowga.
Tallaabooyin kale ayaa hadda shaaca ka qaaday ra'iisul wasaaruhu.
Tan iyo khamiistii la soo dhaafay, tirada kiisaska COVID-19 maalin kasta waxay kor u dhaaftay 200, saddex maalmoodna, waxay kor u dhaaftay 300 xaaladood. Isbitaalada ayaa sidoo kale cadaadis lagu hayaa maadaama meelaha sariirta ay kooban yihiin.
Horaantii, Holness wuxuu sawir xun ka bixiyay xaaladda COVID-19 ee Jamaica isagoo shaaca ka qaaday in 1,903 kiis oo fayras oo cusub la diiwaan geliyey intii u dhexeysay 1-dii Agoosto ilaa 8-dii Ogosto.
Natiijo ahaan, 238 xaaladood oo COVID ah ayaa la duubay celcelis ahaan maalin kasta.
Holness wuxuu ku eedeeyay kor u kaca Jamaicans-ka oo aan u hoggaansamin qawaaniinta COVID-19, oo ay ka mid tahay fogeynta bulshada iyo adeecidda tallaabooyinka bandowga.
"Dabeecadda noocan ahi waxay horseedi doontaa inay kor u kacaan kiisaska," ayuu yidhi, isagoo xusay in Dawladdu filaysay kororka kiisaska, taasoo dhalisay in la sii adkeeyo tallaabooyinka xakamaynta fayraska.
eTurboNews ayaa gaaray Hon. Wasiirka Dalxiiska Edmund Bartlett si uu u caddeeyo, laakiin uma suurtagelin inuu helo jawaab, wuxuuna cusboonaysiin doonaa mar kale oo la ogaado.
Qofna ma badbaado ilaa aan dhammaanteen ammaan ka helno ma aha oo kaliya qiimeynta Madaxweynaha Mareykanka Biden, laakiin sidoo kale Edmund Bartlett, Wasiirka Dalxiiska Jamaica. Wuxuu si xoog leh u aaminsan yahay in qaybinta tallaalka ee qof walba loo fidiyo ay tahay furaha. Mr. Bartlett wuxuu u halgamayay waxyeellada waddamada gaar ahaan warshadaha safarka iyo dalxiiska, sida Jamaica oo aan awoodin inay kordhiyaan qaybinta tallaalka.
Mudanaha ugu sharafta badan Andrew Michael Holness waxaa markii ugu horraysay loo doortay xubin Baarlamaan (MP) si uu u matalo Degaanka Galbeedka Bartamaha St. Andrew sannadkii 1997, isagoo 25 jir ah. Hadda markii afaraad oo isku xigta oo uu xildhibaan noqdo, Mr. Holness wuxuu noqday sagaalaadkii Jamaica Raiisel wasaare ka dib markii Xisbiga Shaqaalaha ee Jamaica uu kaga adkaaday Xisbiga Qaranka ee shacabka codbixintii 25 -kii Febraayo, 2016.